23 Jona 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 23 Jona 2019-Alahadin'ny Sampana Vokovokomanga sy Hetsika gasigasy
Tamin’izany no nanambarana fa manoloana ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana dia tsy tanteraka izany fa ny mifanohitra amin’izany aza no notanterahantsika. Nanao izay tsy maha-mendrika teo anatrehan’Andriamanitra isika na tamin’ny fiteny na tamin’ny fitondran-tena. Nanara-po tamin’ny ratsy ka nanalavitra ny Tompo. Mahatsiaro menatra isika ka tsy sahy akory ny hifanatri-tava amin’ny Tompo.
Koa mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy amin’ny Tompo. “Diovy izay ho afa-pahotana ary sasao madio izahay mba ho afaka heloka.”.